पृथ्वीनारायण शाहका तस्बीर कसले बनायो ? अति पुरानो स्केचसहित – rastriyakhabar.com
पृथ्वीनारायण शाहका तस्बीर कसले बनायो ? अति पुरानो स्केचसहित
पृथ्वीनारायण भनेर प्रचारित चित्र र मूर्ति उनको वास्तविक मुहार होइन, अमर चित्रकारको कल्पना हो ।
जंगबहादुरले युरोप भ्रमणपछि बनाउन लगाएका शालिक र चित्रमा यथार्थवादी प्रभाव झल्किन थाल्यो । अनि बल्ल त्यसयताका पात्रका सार्वजनिक मूर्ति र चित्रकला काल्पनिक नभएर वास्तविकतामा आधारित हुन थालेका हुन् ।